Tartanka Gothia Cup, Fayrus ka dhasha shilinta iyo Dhaantada dhallaanka qurbaha. en SRI Somaliska en mp3(19/07 a las 17:29:31) 02:21 38691384 - iVoox
A continuación: Shirkad Swedish ah oo markab looga heysto Iran. Gabdhaha oo kaga wanaagsan wiilasha xagga iskuulka. Dawooyin laga digay. Cancelar 10
Descripción de Tartanka Gothia Cup, Fayrus ka dhasha shilinta iyo Dhaantada dhallaanka qurbaha.